Ungayicima njani inyathelo lethu leakhawunti yeTwitter | Iindaba zeGajethi
Ungayicima njani iakhawunti yethu yeTwitter
UJordi Gimenez | | I intanethi
Enye yeendlela ezinokuthi zihambe entlokweni yakho ngosuku olunzima kunye nenethiwekhi yoluntu iTwitter kukususa ngokupheleleyo iakhawunti yakho. Ayisiyomfuneko ibalulekileyo ukuba nemini embi yokufuna ukucima i-akhawunti yale nethiwekhi yoluntu eyaziwayo, inokuba ngenxa yezinye izizathu ezininzi kwaye ngokucacileyo ukunqongophala kokusetyenziswa yeyona iphambili kwiimeko ezininzi ukwenza isigqibo sokucima iakhawunti.
Kucacile ukuba nasiphi na isizathu kungakhokelela kwisizathu esinyanzelayo sokucima iakhawunti kwaye yiyo loo nto kufuneka sazi ngalo lonke ixesha ukuba yenziwa njani. Kule meko sinokuthi kulula kakhulu kunokususa iakhawunti kwi-Facebook okanye nakwezinye iinethiwekhi zentlalo, ke masibone amanyathelo ekufuneka siwalandele ukucima iakhawunti yethu ye-Twitter.
1 Ndidiniwe yi-Twitter kwaye ndifuna ukucima iakhawunti yam
2 Ungayicima njani iakhawunti yethu yeTwitter kwiwebhusayithi uqobo
3 Cima iakhawunti kwifowuni yethu
4 Yintoni esinokuyenza xa iakhawunti ingasebenzi
Ndidiniwe yi-Twitter kwaye ndifuna ukucima iakhawunti yam
Ngaphandle kwamathandabuzo esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba abasebenzisi abanjengawe okanye mna basuse iiakhawunti kunxibelelwano lwasentlalweni. Ukudinwa kokuzisebenzisa, nokuba kungenxa yokuba "begqithile" ngandlel 'ithile okanye ngenxa yokuba asizisebenzisi yonke imihla kwaye ke ngenxa yoko abasiboneleli nganto yenye yezona zizathu ziphambili zokuthatha inyathelo lokucima iakhawunti.
Ngaphambi kokuba uqale kufuneka ucace ukuba "ngekhe ucime iakhawunti yanamhlanje yangomso" ke kuya kufuneka sikwenze oko cima iakhawunti kangangeentsuku ezingama-30 kwaye ukuba iakhawunti ayifumani nawuphi na umsebenzi kuthi, iya kucinywa ngokuzenzekelayo. Ke ngaphambi kokuqala ukwenza amanyathelo yenze icace into yokuba kunjalo.
Ungayicima njani iakhawunti yethu yeTwitter kwiwebhusayithi uqobo
Into yokuqala kukwazi ukuba singasusa phi iakhawunti yethu. Cacisa kwakhona ukuba awunakucima iiakhawunti ze-Twitter kwezinye iinkqubo zomntu wesithathu okanye iinkqubo zokulawula iiakhawunti zakho, kuya kufuneka uyenze ngokuthe ngqo iisayithi ezisemthethweni ze-Twitter nokuba yeyiphi na iwebhusayithi okanye usetyenziso ziyafumaneka kuwo onke amaqonga eselfowuni.
Kule meko siza kuqala ngokususa iakhawunti kwiwebhusayithi esemthethweni yenethiwekhi yoluntu kwaye oku kuya kufuneka silandele la manyathelo alandelayo. Ngokucacileyo, into ekufuneka siyenzile kuqala kukufunda ngegama lethu lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwinethiwekhi yoluntu, kwimeko yokungabinayo le datha kuya kuba nzima ukwenza inkqubo nangona kungenakwenzeka. Ewe, into yokuqala kukucofa ngqo kwi-avatar ebonakala ngasekunene, ongumfanekiso wethu:
Nje ukuba singaphakathi kufuneka sicofe ukhetho olubonisa Useto kunye nokuNgasese. Ngoku kuya kufuneka uye ezantsi kwaye ucofe ukhetho oluthi "Khubaza iakhawunti yam" Kwaye, ngoku ibhokisi yencoko yababini iya kubonakala ukuba kuya kufuneka siqinisekise kwakhona kwaye ithi:
Umalunga nokuqala inkqubo yokwenza kungasebenzi iakhawunti yakho ye-Twitter. Igama lakho lokubonisa, i-@user yakho, kunye neprofayili yakho yoluntu ayisayi kubonakala kwi-twitter.com, kwi-Twitter ye-iOS, okanye kwi-Twitter ye-Android.
Cima iakhawunti kwifowuni yethu
Kule meko kunjalo inkqubo elula esinokuyenza nanini na kwaye nakwesiphi na isixhobo esinesicelo esisemthethweni seTwitter. Ayinamsebenzi ukuba inkqubo yethu yokusebenza iyi-Android okanye i-iOS, inkqubo iyafana naleyo siyenzayo kwiwebhusayithi esemthethweni ukuze singabinangxaki naluphi na uhlobo.
Kwimeko yam ndinesixhobo se-iOS kwaye izinto ezithathiweyo zithathwa ngesi sixhobo kodwa kuso nasiphi na isixhobo esine-Android OS singenziwa ngendlela efanayo ngokufikelela kuseto lweapp ngokwayo ngaphandle kwengxaki. Ke siza kuvula usetyenziso kwisixhobo kwaye ungene ngegama lethu lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuba asikaphumeleli. Ngoku la manyathelo afana ncam nalawo angaphambili, ingatsho ukuba ayafana.
Kuqala kufuneka singene ngokunqakraza kumfanekiso weprofayile yethu ephezulu ngasekhohlo kwaye imenyu iya kuvula ngokhetho Useto kunye nemfihlo. Inyathelo elilandelayo kukucofa kwindawo yokuqala kukhetho oluvela kule menyu, Akhawunti kwaye ngoku siyaqhubeka nenkqubo yamanyathelo amathathu. Ezantsi sibona ukuba ukhetho luyavela Yenza iakhawunti, yinto ekufuneka siyicinezele ukwenza iakhawunti ingasebenzi.
Njengoko besenzile kwiwebhusayithi kaTwitter, inkqubo iyakuthatha iintsuku ezingama-30 ukuba zisebenze, ke asizukuyicima i-akhawunti ngalo mzuzu kwaye siya kuhlala sikwazi ukuyibuyisela ngeli xesha, emva kwale mihla iakhawunti iya kuba isuswe ngokupheleleyo ukuba akukho msebenzi kuyo.
Ngayiphi na imeko, ukuba sibona ukuba sinengxaki ekususweni kweakhawunti kwisicelo ngokwaso, nokuba siyintoni na isizathu, sinokuhlala sisiya kwisikhangeli sewebhu kwifowuni yethu kunye nokufikelela twitter.com/settings/account en ibha yedilesi yomkhangeli ukucima iakhawunti kwiwebhu. Ngokucacileyo siyabhalisa kwaye emva koko sinokulandela amanyathelo afanayo esiwenzileyo ukucima iakhawunti kwiwebhu. Kule mihla, kulula ukufikelela kwidatha ye-Twitter kwisicelo ngokwaso okanye kwisikhangeli somhloli wethu.
Yintoni esinokuyenza xa iakhawunti ingasebenzi
Njalo kubalulekile ukuba ufunde ulwazi abasibonisa lona kuzo zonke iiwebhusayithi, usetyenziso kunye nokunye "ukushicilelwa okuhle" nakweyiphi na imeko. Ngale ndlela, i-Twitter icace gca ngenkqubo yonke kwaye asizukuba neengxaki ngokushicilelwa okuncinci okanye okufanayo, kodwa kubalulekile ukuba sifunde into esiyenzayo ukulungisa okanye ukuvuselela iakhawunti.
Ukuba iakhawunti yakho ye-Twitter iyekisiwe kwaye uyazisola Nokuba kungasiphi na isizathu, ungasoloko uyisebenzisa kwakhona njengoko besitshilo ekuqaleni. Ngale nto sineentsuku ezingama-30 emva kokuyekiswa ukusebenza. Ukusuka kwinethiwekhi yoluntu, bayasichazela ukuba inxenye yolwazi lwethu ingaqhubeka ifumaneka kwiinjini zokukhangela zikaGoogle okanye zeBing.
Sinokusebenzisa igama lomsebenzisi elisusiweyo kwenye iakhawunti ye-Twitter okanye idilesi ye-imeyile ebhalisiweyo. Ngale nto sinokwenza utshintsho ngaphambi kokuvala ngokupheleleyo iakhawunti kweli candelo yenethiwekhi yoluntu. Ukuba ufuna ukukhuphela idatha yakho ye-TwitterKuya kufuneka ugcwalise isicelo kunye nenkqubo yokukhuphela ngaphambi kokuvula iakhawunti yakho. Ikhonkco lokukhuphela idatha yakho alinakuthunyelwa kwiiakhawunti ezingasebenziyo ke le nkqubo kufuneka yenziwe ngaphambili.
Yinkqubo elula ukucima iakhawunti ye-Twitter kodwa ngeendlela ezininzi esinazo ezikhoyo kuseto, kulungile ukuba namanyathelo acace gca ngaphambi kokuchukumisa nantoni na. Ukuba silandela esi sifundo sincinci siya kuyicima iakhawunti yethu ngokulula nangokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Ungayicima njani iakhawunti yethu yeTwitter
Elona Khaya liBalaseleyo kwiKhaya kunye neMveliso zeMpilo zithengiswa eAmazon